Igama elithi "kancane": kanjani ukupela? Funda impendulo yalo mbuzo uzokwazi kulesi sihloko. Ngaphezu kwalokho, sizokutshela ngalokho tenkhulumo kungokwalabo le nkulumo, kanye ngaphansi kwaziphi abuse uwe.
Igama elithi "nje" singabaze abantu abaningi abasebenzisa kuyo incwadi. Futhi lokhu akumangalisi. Phela, akuwona wonke umuntu eside iziqu wezemfundo, bangakhumbula umthetho echaza ukupelwa izwi. Nokho, umuntu kufanele uqaphele ukuthi izwi kungenziwa ezibhaliwe noma hyphenated noma ngokwehlukana. Lokho Fusion yayo kulesi sihloko kungabaza.
Igama elithi "kancane": njengalokho kulotshiwe embhalweni? Ukuze siphendule lo mbuzo, kudingeka sithole kahle ukuthi yini tenkhulumo lapho inkulumo inikezwe. Phela, indlela kuphela ukuthola umthetho kwesokudla isiRashiya, okuyinto futhi uchaza isipelingi yayo.
Ngakho, ukuze sinqume ingxenye yokukhuluma , sidinga ukuba izwi elihambisana mbuzo. Lokho-ke akuzange kumenze noma ibuphi ubunzima, bephawula isibonelo isiphakamiso lapho inkulumo kuhileleke:
"Thina (nje) iqebelengwana elincinyane amnandi sanqunywa, kanti bonke abanye esisalele kusasa."
Kulesi sibonelo, igama elithi "omncane" kube yiyo ephendula imibuzo ethi "kangakanani?" Futhi has a ukubaluleka "kancane". Ngokusho isiRashiya, okuyinto nkulumo isandiso, futhi imele elithile degree.
I isandiso "kancane": kanjani ukupela kahle? Ukuze siphendule lo mbuzo, kumelwe uthole kahle umthetho, okuzokwenza achaze lo mbhalo ahlukene lokhu tenkhulumo noma ikhonco. Cabanga oda.
Hlukanisa lokubhala tandziso
Okunjalo tandziso ukubhala kanye nanoma yikuphi inhlanganisela linganquma isiko tandziso noma zincike ngqo ukuthi le ngxenye kwenkulumo sesakhiwe.
Ngakho, sibhala eceleni uma:
kwamiswa Isandiso kusuka kwenye tandziso nesikhatsi limelela inhlanganisela isabizwana nge izwi ezingeguquleke, okuyinto esetshenziswa okushiwo zebizo. Ngokwesibonelo: ophaya waya bajabule, ukunciphisa zokuxhumana zingabi yilutho, kudlule esimisweni kahle-hle.
Isandiso iye ezakhiwe inani has isabizwana "e" futhi bebonke inani (ngabathathu, ezihamba ngezinyawo ezine, njll).
kwamiswa I isandiso kusukela isabizwana nge isabizwana (kulokhu, noma kunjalo, kanjalonjalo.).
kwamiswa I isandiso kusukela isiphawulo ngesimo kwenzeka futhi isabizwana (endaweni evulekile).
kwamiswa I isandiso kusuka Ibizo ukwakha homonymous nge isabizwana (kusukela ekuqaleni noma kuqala).
Phakathi kwezinye izinto, kuyadingeka ukukhumbula ukuthi lezi zezigodi zilotshiwe njalo eceleni: Sekungamakhulu eminyaka, endaweni, hhayi ezisheshayo, ngaphandle kokubuza, kwanhlanga zimuka nomoya, ngaphandle ulahlwa unembeza, ngaphandle kwemingcele, ngokuphuthumayo, bawe, ekufeni, satiety, ne pantalyku nge kondachka, luningi ngaphansi kwesitsha, isiqalo egijima, ukufanisa, ngokubi, ngaphansi ingalo, ngenxa yokwesaba, nge kahle, ngaphansi ekhaleni, ngaphansi ezisonga nokunye.
Njengoba ubona, okungenhla ethulwa ngokuvamile akubandakanyi igama elithi "kancane." ingabe ukupela kanjani le nkulumo, siyasibona kakade ukuqagela. Phela, uma asikwazi elisetshenziswe embhalweni eceleni, ngakho-ke hyphenated. Kodwa ukubona lokhu, kufanele kubhekwe ngendlela efanayo kanye nezinye imithetho isiRashiya.
Tandziso kukhona hyphenated kulezi zimo ezilandelayo:
Uma akhiwa tabito-isiphawulo noma isiphawulo umnyuziki esebenzisa side-Isijobelelo indlela (nge tijobelelo -emu, -th, futhi isiqalo po- s). Nasi sibonelo esigqamile: ngamanye amazwi, ngempela, ngendlela abantu, ngesiNgisi, French, impungushe nabanye.
Uma isandiso iye ezakhiwe i inani okwesingaki esebenzisa uhlangothi-Isijobelelo indlela (nge ticalo noma vo in- netijobelelo kukhona -S zabo noma isibonelo sobala. Okokuqala, yesithathu, yesibili, yesihlanu, -desyatyh nabanye.
Uma isandiso has sicalo postfix Koe-noma-ke, nonomusa ngolunye usuku. Ngokwesibonelo, ngasizathu simbe, ngandlela-thile, ngolunye usuku, kukhona okuhle, endaweni ethile, phela lapho umuntu nokunye.
Uma isandiso kwamiswa ngokuphinda:
- ngezwi elifanayo (ngokulambisa nje, okumenza nje, kulungile);
- bomcondvofana (ahambisana noma isizathu, ngandlela-thile, ngesikhathi esihle, kungalindelekile;
- impande efanayo, okwakubekelwa nzima tijobelelo kanye neticalo (kuphela, i-ayizinkulungwane, phela, kancane kancane, willy-nilly, kudala).
"A kancane": kanjani ukupela leli gama? Kusukela imithetho ethulwa kuba sobala ukuthi le nkulumo kumele kubhalwe kuphela ikhonco. Ukuze isandiso enjalo lenzeka ngokuphinda esho izwi elifanayo. Ngakho-ke, kumelwe kahle ukubhala: "Thina kancane ukusika ikhekhe elimnandi, kanti bonke abanye esisalele kusasa."
Ngokufanayo, sikwazi ukuchazela ukupelwa noma yiliphi igama ngokuphelele. Into esemqoka nalokhu - ukunquma tenkhulumo, kanye njengelungile yonke imithetho okungenzeka abe maqondana ngqo kuso.